प्रेम प्रस्ताव राख्नका लागि शरीरमा आ’गो लगाइयो ! (भिडियो हेर्नुहोस)
September 9, 2020 980
प्रेम प्रस्ताव रा’खेपछि स्वी’कार होला वा नहोला भन्ने पीरले प्रत्येक प्रेमीलाई सताउँछ । जसले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गरा’उनकै लागि नयाँ नयाँ शैली अ’पनाइन्छ । यस्ता शैली रो’चकमात्र हुँदै’नन् कुनै कुनै बेला बहुत खत’रनाक पनि हुन्छन् । यस्तै सबैलाई चकि’त बनाउने घ’टना छ बेलायतको ।
बेलायत निवासी रिकी’ एश नामक एक ब्य’क्तिले आफ्नी प्रेमी’का कट्रीना डबसनलाई विवा’हको प्रस्ताव राख्दा अपनाएको शैली डर’लाग्दो मात्र छैन यो खत’रनाक पनि छ । पेशाले स्टन्टम्यान रिकी विवाहको प्रस्ताव राख्न प्रेमि’काको अघि शरीरमा आगो लगाए’र पुगे । त्यहाँ उनले फिल्मी स्टाइलमा घुडाँ टेकेर विवा’हको प्रपोज गरे ।
उनले स्टन्ट गरि’रहँदा सुरक्षाका सबै तया’री गरेका थिए । त्यसैले प्रस्ताव राख्नासाथ उनका सह’योगीले आगो निभा’इ दिए । ५२ वर्षीय रिकी लामो समयदेखि स्टन्ट गरिरहेका छन् । उनले हलि’उडका कैयौं ठुला स्टारका’लागी स्टन्ट गरेका छन् ।
रिकीकी प्रेमि’का पेशामा नर्स हुन् । उनीह’रुको भेट अन’लाईनमा भएको थियो । तर जब दुबैले भेटे तब उनीहरुको प्रेम टुट्ने अवस्था’मा पुग्यो । खासमा कट्री’नाको उचाई ६ फिट ३ इञ्च थियो भने रिकीको उचाई केवल ५ फिट ८ इञ्च थियो । तर रि’कीको प्रेम र उनको व्यव’हारले कट्रीनाले उनलाई नै रोजिन् ।
यहाँ थिचेर भिडियो हेर्नुहोस
Prevश्रीमती’लाई ढाँटेर प्रेमिका भेट्न जादाँ कोरोना संक्र’मित भेटिएपछि….
Nextजब वालकले आमा लाई ठक्कर दिने कार माथि आ’क्रोश पोख्दै लात्तीले बजारे…हेर्नुहोस
हेर्नु,होस् भिडियोमा: पेट मिचिमीचि हँसाउने ‘सक्किगोनी’ को नयाँ भाग (भिडियो सहित)
ज्योति मगरको अन्तरबार्तामै चल्यो रुवा’बासी,आफ्नैबाट यति धेरै अप’मान (भिडियो सहित)
आज डलरको भाउ बढ्यो, अरु देशको मुद्राको भाउ पनि बढ्यो…